ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စာစုလေးများ၊ကဗျာလေးများကို စုစည်းထားတဲ့ အပျော်တမ်း ဘလော့လေးပါ ...
ကျွန်မ မငိုဘူးလို့ သူတို့ပြောကြတယ်။ မျက်ရည်ကလည်း အတုတွေပါတဲ့။ တောင်အမေရိကတိုက်က တောနက်တစ်နေရာမှာ ကျွန်မ မင်းမူကျက်စားတယ်။ ကျွန်မက ခွန်အားဗလပြည့်စုံတဲ့ မိကျောင်းတစ်ကောင်ပါ။ ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ ငိုရမှာလဲ?
အမှောင်ထဲကနေ ကျွန်မအမြဲလန့်လန့်နိုးတယ်။ ညတိုင်းမက်တဲ့အိပ်မက်ထဲကနေ ကျွန်မ လန့်နိုးတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မ အင်အားမဲ့နေတယ်။ မျက်လုံးတွေ ဖျော့တော့နေတယ်။ ကိုယ်လက်တွေ လှုပ်ရှားလို့မရဘူး။
ကျွန်မကိုမွေးဖွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ အမေနဲ့အတူ စွတ်စိုတဲ့ကမ်းစပ်တလျှောက် ကျွန်မတွားသွားနေခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က မနက်ခင်းဆိုတာကို ကျွန်မကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတယ်။ နေရောင်ခြည်ကြောင့် လက်လက်ထနေတဲ့ အေးစိမ့်စိမ့်ချောင်းရေတွေက ကျွန်မကိုယ်ပေါ်ဖြတ်စီးနေတယ်။ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲ ကျွန်မနစ်မျောနေမိတယ်။
ကျွန်မက အမေရဲ့အငယ်ဆုံးကလေးပါ။ ကျွန်မကို အစာပေးတယ်၊ နေရာအနှံ့ခေါ်လည်တယ်ဆိုပေမယ့် အမေဘယ်တော့မှ မပြုံးဘူး။ တစ်ခါတလေ အမေမျက်လုံးထဲမှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ စွန်းထင်နေတတ်တယ်။ ဒါတွေဟာ အမေ့မျက်လုံးကို ပိုလှစေတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသိမ်မွေ့မှုတွေက လျှပ်တစ်ပြက်အတွင်းမှာ ပျောက်သွားတတ်ပြီး "ဒီလောကကြီးမှာ အားနွဲ့သူရဲ့အသားကို အားသန်သူစားဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ အင်အားကြီးသူ အသက်ရှင်စတမ်းဆိုတဲ့ ဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်" လို့ အမေပြောတယ်။
ဒါကြောင့် အားနွဲ့သူ မဖြစ်ရဘူး။
အဲဒီနေ့မနက်က ကျွန်မတို့ အတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ ချောင်းအကွေ့တစ်ခုမှာ အမေက ကျွန်မကိုရှေ့ဆက်သွားဖို့ အမိန့်ပေးတယ်။ အမေ့စကားကို ကျွန်မနားထောင်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားတယ်။ စကျင်ကျောက်တွေကြောင့် ကျွန်မဗိုက်သားတွေ စူးပြီးနာနေတယ်။ ရှေ့ဆက်မသွားချင်လို့ ရပ်လိုက်ပြီး အမေ့ကို ကျွန်မလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အမေကနောက်ပြန်လှည့်ပြီး ဆုတ်ခွါဖို့ပြင်နေတာကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။ အမေ့ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မနားမလည်ဘူး။ ကိုယ်ကိုအမြန်လှည့်ပြီး အမေနောက်အမီလိုက်ဖို့ ကျွန်မစဉ်းစားလိုက်တယ်။
ရုတ်တရက် ကျွန်မခါးကနေ ကိုင်မြောက်ခံလိုက်ရတယ်။ ထက်မြက်တဲ့သွားတွေက သိပ်မမာသေးတဲ့ ကျွန်မအခွံထဲတိုးဝင်လာတယ်။ ကျွန်မရုန်းမိတယ်။ အမြီးနဲ့ရေပြင်ကို ကျွန်မရိုက်ပြီးရုန်းမိတယ်။ အမေက ကျွန်မကို နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တယ်။ အမေ့မျက်လုံးထဲမှာ ပြတ်သားတဲ့အရိပ်တွေ ပြည့်နေတယ်။ အမေပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ကျွန်မရုတ်တရက် သတိရလိုက်မိတယ်။ ကျွန်မတို့မိကျောင်းမိသားစုမှာ ကိုယ့်အသက်ရှင်ဖို့ ကိုယ့်သားသမီးတွေကိုလည်း စွန့်လွှတ်နိုင်ရသတဲ့...
ကျွန်မ မျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်တွေ ပန်းထွက်လာတယ်။ အမေ... အမေ!
ဒီတောနက်ထဲမှာ နောက်ထပ်အင်အားကြီးသူက ကျားသစ်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အမူအရာကသိမ်မွေ့ပြီး သွားတွေက ချွန်ထက်တယ်။ မနက်ပိုင်းမှာ သူတို့အစာရှာလေ့ရှိတယ်။ တစ်ခါတလေ မိကျောင်းလေးတစ်ကောင်ကလည်း သူတို့အတွက် အရသာထူးတဲ့မနက်စာဖြစ်တယ်။
ကျွန်မကိုဖမ်းတဲ့ကျားသစ်က ကျားသစ်မတစ်ကောင်ပါ။ ကျွန်မ မကြောက်မိဘူး။ ကျွန်မကိုထားပြီး အမေ နောက်ပြန်လှည့်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီး ကျွန်မ ဘာကိုမှ မကြောက်တော့ဘူး။ ကျွန်မကို ကျားသစ်လေးတွေရှေ့ ကျားသစ်မ ပစ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန် ကျားသစ်မကို ကျွန်မနှစ်သက်သွားမိတယ်။ အမေလည်း ကျွန်မကို အစာတွေကျွေးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။
ကျားသစ်လေးတွေကို လျာနဲ့လျှက်ပြီး မနက်စာစားဖို့ ကျားသစ်မက ညင်ညင်သာသာခေါ်နေတယ်။ ကျားသစ်လေးတွေက ကျွန်မဘက်ကို ဦးတည်လာနေတယ်။ ဦးခေါင်းထိပ်မှာ ထောင့်ရှစ်ထောင့်ရှိတဲ့နေမင်းလို ထူးခြားတဲ့ပန်းကွက်ပါတဲ့ ကျားသစ်ငယ်လေးတစ်ကောင်က ကျွန်မအနားနားကပ်ပြီး ကျွန်မကိုကြည့်တယ်။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ "စားပါ.. စားပါ.. မင်းသိပ်ကံကောင်းတယ်။ မင်းမှာ မင်းကိုချစ်တဲ့ အမေရှိတယ်။ ငါ့မှာ ဘာမှမရှိဘူး။ ငါသေတာပဲကောင်းမယ်" လို့ တွေးနေမိတယ်။
ကျားသစ်လေးက ကျွန်မကိုကြည့်ပြီး ကျားသစ်မကိုမေးတယ်။
"သူဒီလောက် ငယ်တာ... သူ့မေမေရော?"
ပြောပြောဆိုဆို ကျားသစ်လေးက ကျွန်မကို ရုတ်တရက် ရေထဲပစ်ချလိုက်တယ်။ ကျားသစ်မဘေးမှာ ပွတ်သပ်ကျီစယ်ရင်း ရေစီးနောက် မျောသွားတဲ့ကျွန်မကို သူငေးကြည့်နေခဲ့တယ်။
အမေ့အနား ကျွန်မ မပြန်ခဲ့ဘူး။ ရေစီးအတိုင်း နောက်နေရာတစ်နေရာဆီ ကျွန်မစီးမျောခဲ့တယ်။ ကျွန်မ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ ကိုယ်တိုင်အစာရှာတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အိပ်မက်ဆိုး မကြာခဏမက်တတ်တယ်။ မက်တဲ့အိပ်မက်တိုင်းက ကျွန်မကို အမေစွန့်ပစ်တဲ့ မနက်ခင်းဖြစ်တယ်။ အိပ်မက်ရဲ့အစက လှပတယ်။ အဲဒီနောက် တဖြည်းဖြည်း အကျည်းတန်လာပြီး ဒဏ်ရာတွေ ပြင်းထန်လာတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးက လန့်နိုးလာတိုင်း ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ မေးမိတယ်။ ကျွန်မဘာဖြစ်လို့ မိကျောင်းဖြစ်ရတာလဲ?
ကျွန်မလူလားမြောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ အရေခွံတွေမာကျောပြီး မျက်လုံးတွေစူးရှလာတယ်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လာတယ်။ ဒီရေစီးကြောင်းမှာ ကျွန်မဟာ ဘုရင်တစ်ဆူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာ ကျွန်မရင်သွေးလေးတွေရှိတယ်။ မိခင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ကျွန်မကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုကျွန်မချစ်တယ်၊ ဂရုစိုက်ကာကွယ်တယ်၊ အန္တရာယ်နဲ့ကြုံခဲ့သည့်တိုင် သူတို့ကိုစွန့်ပစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ဖို့ ကျွန်မကိုယ်လွတ်ရုန်းမှာ မဟုတ်ဘူး။
မိကျောင်းမိသားစုမှာ မိခင်ကောင်းတစ်ဦးရှိတယ်လို့ တောနက်ထဲမှာ သတင်းမွှေးခဲ့တယ်။ ကလေးတွေက ဒီအတွက် ကျွန်မကို ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြတယ်။
တစ်ည အိပ်မက်ဆိုးကနေ ကျွန်မလန့်နိုးလာတဲ့အချိန် အနီရောင်အလင်းတန်းတစ်ခုကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။ ကလေးတွေကိုနှိုးပြီး နေရာကနေကျွန်မခွါခိုင်းတယ်။ ဒီနေရာက မကြာခင်ပျက်သုန်းတော့မယ်။ ကီလိုမီတာ(၂၀)က တောအုပ်တွေ အဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်။ ကီလိုမီတာ(၂၀၀)အပြင်ကတောအုပ်တွေ စိုက်ပျိုးမြေဖြစ်ခဲ့တယ်။
အတော်ကြာ ခရီးဆက်ပြီး အရင်က ကျွန်မနေခဲ့တဲ့နေရာကို ကျွန်မတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း အစာတွေ ခေါင်းပါးနေပြီ။ တိရစ္ဆာန်အများက ဒီထက်နက်ထဲ တောထဲပြောင်းရွေ့သွားကြပြီ။ အသက်ရှင်နေတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကို ကျွန်မတို့မမြင်မိတာ (၂)ရက်ရှိနေပါပြီ။
မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ အငယ်ဆုံးကလေးကိုခေါ်ပြီး ကျွန်မအစာရှာထွက်ခဲ့တယ်။ ကံဆိုးစွာနဲ့ ကျွန်မရဲ့မျက်စိရှေ့မှာပဲ ကျားသစ်တစ်ကောင်ရဲ့ အတိုက်အခိုက်ကို သူခံလိုက်ရတယ်။ ရှေ့ကို အမြန်ထိုးတက်ပြီး ကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့ ကျွန်မကြိုးစားတယ်။
ရှေ့တက်ပြီး ကျားသစ်ကို ကျွန်မအမြီးနဲ့ ပုတ်ထုတ်မယ့်အချိန် ကျားသစ်ရဲ့ဦးခေါင်းထိပ်က ရှစ်ထောင့်နေမင်းကို ကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်။ သူပိန်လှီနေတယ်။ ဗိုက်တွေပြားချပ်နေတယ်။ အစာမစားရတာ တော်တော်ကြာနေပုံရတယ်။ တကယ်လို့ အစာထပ်မရရင် သူသေနိုင်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ကျွန်မမှာ သားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီကျားသစ်သာမရှိခဲ့ရင် ကျွန်မမှာလည်း ဒီမိသားစုရှိခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မအကြာကြီး တွေဝေနေတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်မလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ထောင့်ချိုးတစ်နေရာရောက်တော့ ကျွန်မနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်မိတယ်။ ကျွန်မအမြင်တွေ မှုန်ဝါးနေတယ်။ မျက်စိရှေ့ကအရာအားလုံးကို ကျွန်မသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်နိုင်တော့ဘူး... ကျွန်မရဲ့မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်နှက်နေလို့လေ.......
နိုင်းနိုင်းစနေ (Saturday, May 29, 2010)
Posted by မင်းသားကြီး at 07:334comments
Labels: ကောင်းနိုးရာရာ ...
ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာ ဥာဏ်မမှီတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်… မွေးကတည်းက ဥာဏ်မမှီတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့အသက်၅နှစ် အရွယ်မှာ အဆိပ်ဓာက်ငွေ့ ရှူမိပြီးသူတစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်နေခဲ့တယ်… သူနဲ့တစ်ခန်းတည်း အတူတူ အိပ်နေတဲ့ သူ့အဖေဟာ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့အင်အားကို သုံးပြီး သူ့ကို ပြတင်းပေါက် အပြင်ဘက်ကို တွန်းပို့နိုင်လိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အခန်းထဲမှာဘဲ လဲကျ သေဆုံးခဲ့ရတယ်… အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကောင်လေးဟာ ပျော်သည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ညစ်သည်ဖြစ်စေ အမြဲတမ်း အအနဲ့ ရယ်နေ ပြုံးနေတတ်တယ်… ပြောကြတာကတော့ အဆိပ်ငွေ့ရှူမိပြီးနောက်ပိုင်း ဦးနှောက်ထိသွားရှာတယ်။
ကောင်လေးမှာ လှပတဲ့ အမေနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်… သူ သူ့အမေကို အမြဲမေးလေ့ရှိတယ်… သူ့ ဖေဖေ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲတဲ့… သူ့မေမေက တော့ သူကို ပြန်ဖြေတယ်… ဖေဖေဆုံးသွားပြီ… သူ ကြယ် အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ ဟိုးမိုးကောင်းကင်ထက်မှာ သားသားတို့ မေမေတို့ကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေတယ်လေ…
ကောင်လေးကတော့ ညတိုင်း ခြံထဲက မြက်ခင်းပြင်မှာ လဲပြီး ကြယ်တွေကို ကြည့်လေ့ရှိတယ်… ကြည့်ရင်းပြုံးရင်း….
ကောင်လေး ၁၁နှစ်သား အချိန်မှာ သူ့ အချစ်ဆုံးမေမေဟာ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ဆုံးသွားရှာတယ
်… မဆုံးခင်မှာ သူ့ညီမလေးကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ဖို့ မှာသွားခဲ့တယ်… အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူ့ညီမလေးက ၆နှစ်ဘဲရှိသေးတယ်။
ကောင်လေးက တော့ အအနဲ့ဘဲ ပြုံးနေတတ်တယ်… ညတိုင်း ကောင်းကင်ထက်က ကြယ်တွေကို ကြည့်လေ့ရှိတယ်… သူပြောတယ်… ကောင်းကင်ထက်မှာ ကြယ် အသစ်တစ်လုံးတိုးလာတယ်… အဲဒါက မေမေဘဲ… ဖေဖေ နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေတယ်…
စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ လူတွေရဲ့ကူညီမှုနဲ့ ကောင်လေးဟာ တွန်းလှည်းဘိန်းမုန့်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်… မုန့်ဆိုင်လေးကတော့ ညီမလေးရဲ့ကျောင်းနဲ့သိပ်မဝေးဘူး…
ကောင်လေးဟာ အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန် ဘယ်တော့မှ ညီမလေးရဲ့ အခန်းထဲကို မ၀င်ဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမလေးက သူ့ကိုမုန်းတယ်… ညီမလေးက ဒီလို လအ အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိတာကို မကြိုက်ဘူး… ဒါပေမဲ့ သူကတော့ ညီမလေးရဲ့ အခန်းတံခါးဝလေးကိုမှီပြီး ညီမလေး စာကြည့်နေတာကို ကြည့်နေရတာကို နှစ်သက်တယ်… သူ့ညီမလေး သတိထားမိလိုက်တိုင်း သူကတော့ အပြစ်လုပ်မိတဲ့ ကလေးလေး တစ်ယောက်လို ပုန်းနေရှာတယ်…ပြီးတော့ ပြုံးလိုက်သေးတယ်… ပျော်သလား… ၀မ်းနည်းလားတော့ မသိဘူး…
ကောင်လေးဟာ မနက်တိုင်း စောစောထပြီး ညီမလေး အတွက် မနက်စာလုပ်ပေးပြီးမှ တွန်းလှည်းလေးတွန်းပြီး အလုပ်သွားလေ့ရှိတယ်… ညဘက်ကျတော့… ကြယ်တွေကို ကြည့်နေရတာဟာ သူ့ အကြိုက်ဆုံး အလုပ်ဘဲ။
ကောင်းလေးရဲ့လက်ရာဟာ အရမ်းကောင်းတယ်… ကျောင်းက ဆရာတွေကော… ကျောင်းသားတွေကော သူ့ရဲ့ ဆိုင်မှာ ဘိန်းမုန့်ဝယ်စားလေ့ရှိတယ်… ဒါပေမဲ့ ကောင်းလေးမှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ညီမလေးချောချောလေးတစ်ယောက်ရှိတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညီမလေးက သူ့ဆီမှာ လအ အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိတာကို မသိစေချင်ဘူး… ကောင်လေးကတော့ အအနဲ့ပြုံးနေတတ်တယ်… ပျော်သည်ဖြစ်စေ… စိတ်ညစ်သည်ဖြစ်စေ…
ကောင်လေးက အလုပ် အရမ်းကြိုးစားတယ်… ပြီးတော့ ပိုက်ဆံလဲ အရမ်းချွေတာတယ်… သူဒီလောက်ထိကြိုးစားပြီးပိုက်ဆံရှာနေတာ ဘာအတွက်လဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး… ကောင်လေး အလုပ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ လက်ကို ခဏခဏ မီးပူလောင်တယ်… ဖိနပ်တစ်ဖက်လဲ အမြဲလိုလိုပျောက်လို့… ညီမလေးက မြင်ရင် “ဒါလေးလုပ်တာတောင် မီပူလောင်တတ်တယ်… ဖိနပ်ကလဲ ပျောက်တတ်သေး… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုဘဲ ဖျောက်လိုက်ပါတော့လား… တကယ် အ တာဘဲ” ကောင်လေးက နားထောင်ပြီးတော့လဲ အအနဲ့ပြုံးနေတတ်တယ်… ပျော်နေလား… ၀မ်းနည်းနေလားတော့ မသိ…
ကောင်လေးဟာ ညတိုင်း မအိပ်ခင် စာအုပ်လေးမှာ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ရေးလေ့ရှိတယ်… ညီမလေးကတော့ စပ်စုပြီး ကြည့်ချင်တယ်… ကောင်လေးကတော့ ဘယ်တော့မှ ပေးမကြည့်ဘူး…ရေးပြီးတာနဲ့ကို သိမ်းထားလိုက်တယ်… ညီမလေးကတော့ ကြိုးစားပြီး ရှာကြည့်သေးတယ်… ရှာမတွေ့တော့တဲ့နောက်ဆုံး ညီမလေးလဲ လက်လျှော့လိုက်တယ်…
ကောင်လေး ၁၇ နှစ်ရှိပြီ… ညီမလေးကတော့ အလယ်တန်းစတက်နေပြီပေါ့… ကောင်းလေးရဲ့ ဆိုင်လေးလဲ ညီမလေးရဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းနဲ့ မနီးမဝေးနေရာကို ပြောင်းခဲ့တယ်… မနက်တိုင်း မုန့်ရောင်းလို့ကုန်ရင် ညီမလေးရဲ့ကျောင်းဘက်ကို သွားကြည့်လေ့ရှိတယ်… ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ အမြဲတမ်းညစ်ပတ်နေပြီးဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့… ခြေထောက်မှာလဲ ဖိနပ်တစ်ဖက်က အမြဲပျောက်လို့… သူအလုပ်လုပ်ရင်တော့ သူ့တွန်းလှည်းဆိုင်လေးဟာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပါဘဲ… အမြဲတမ်းပြုံးနေတတ်တယ်…
တစ်နေ့မှာ သူ့ဆိုင်ရှေ့ဖြတ်သွားတဲ့ ကျောင်းသူလေး၂ယောက်က သူ့ညီမလေးရဲ့နာမည်ပြောသံကြားလိုက်ရတယ်… “သူအတန်းထဲမှာ မျက်နှာမကောင်းဘူး… ခါးလဲ အရမ်းနာနေတယ်…” ကောင်လေးကပြောသံ ကြားပြီး ခဏကြောင်သွားတယ်… နောက် ရုတ်တရက် သူ့ညီမလေး နာမည်ကို အကျယ်ကြီးခေါ်ပြီး ကျောင်းဘက်ကို ပြေးသွားတယ်… သူက ဒီတိုင်းဘဲ ညီမလေးရဲ့နာမည်ကို အကျယ်ကြီးအော်ခေါ်ပြီး ကျောင်းက ကျောင်းစောင့်တွေ ဆရာမတားတာတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ညီမလေးရဲ့ စာသင်ခန်းဆီကို ရောက်သွားတယ်… ညီမလေးက စာပွဲပေါ်မှာ မှောက်နေပြီး မျက်နှာက ဖြူဖျော့ပြီး ချွေးတွေပြန်လို့… ကောင်လေးဒီတချိန်မှာတော့ မပြုံးနိုင်တော့ဘူး… မျက်နှာမှာ ပူပန်မှုတွေနဲ့ ညီမလေးကို ကျောပိုးပြီးတော့ ဆေးရုံကို ပြေးတော့တာဘဲ…
လမ်းမှာ ကျောင်းက ဆရာမတွေနဲ့တွေ့တော့ သူ့ကိုမေးတယ်… “နင် ဒါဘာလုပ်တာလဲ… သူ့ကို ချလိုက်…” ကောင်လေးက ဒေါသနဲ့ မျက်နှာက နီရဲနေပြီးပြောလိုက်တယ်… “သူ က ကျွန်တော့ညီမ… ကျွန်တော်က သူ့ အစ်ကို” ကောင်လေးဟာ တစ်လမ်းလုံး ဒီစကားကိုဘဲ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်ရေရွတ်ပြီး ကျောင်းနားက ဆေးရုံကို ရောက်ခဲ့တယ်… ကျောင်းက ဆရာတွေကော ကျောင်းသားတွေကော အံ့သြကုန်တယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာ အစ်ကို တစ်ယောက်ရှိတာကို ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး…
ကောင်လေးက အခန်းအပြင်ဘက်မှာ ညီမလေးကို ကြည့်နေတယ်… သူနိုးလာပြီ… ကောင်လေးက ဆေးရုံမှာ ၃နေ့၃ည ကောင်းကောင်းမနားရဘူး… ဆေးရုံက သူနာပြုက ပြောလိုက်တယ်… “ဘာမှစိတ်မပူနဲ့… ညီမလေး အစ်ကိုက ဆေးစရိတ်တွေ အားလုံး အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီ…” ညီမလေး က အားစိုက်ပြီး အခန်း အပြင်ဘက်က ကောင်လေးကို ကြည့်လိုက်ပြီး စိတ်ထဲမှာတော့ သံသယစိတ်တွေနဲ့… အဲအချိန်မှာ ကောင်လေးက နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားပြီ… အအလေးပြုံးနေပြီး အခန်းထဲကို မ၀င်ရဲဘူး…
သူနာပြုက ညီမလေးကို ပြောတယ် … သူ အမြဲတမ်း ကောင်လေးဆိုင်မှာ မုန့်ဝယ်နေကျ… ကောင်လေး အလုပ် အရမ်းကြိုးစားမှန်း သိတယ်… ပိုက်ဆံ မဖြုန်းတတ်ဘူးဆိုတာလဲ သိတယ်… အစပိုင်းတုန်းကတော့ ဘာလို့ဒီလောက်ထိကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံရှာနေရတာလဲ ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ဘူး… ဒီနေ့မှဘဲ သဘောပေါက်တော့တယ်… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်လေး ညီမလေးကို ပိုးပြီး သူ့ကိုတွေ့တဲ့ အချိန်မှာ သူအော်ပြီးပြောနေတာက “ မေမေ က ဒီလိုဘဲ သေသွားတာ… တောင်းပန်ပါတယ်… ညီမလေးကိုကယ်ပါ… ကျွန်တော့ညီမလေး မသေပါရစေနဲ့…” အကြောင်းရင်းကတော့ ကောင်လေးမေမေ မသေခင်မှာ သူ့ကို မှာခဲ့တယ်… သူ့ညီမလေးမှာလဲ ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိတယ်… သူ့ကို ကောင်းကောင်းဂရုစိုက်ဖို့ မှာခဲ့တယ်…
ဆရာဝန်က ပြောတယ်… “ညီမလေး ကျောက်ကပ်က အခြေအနေ တော်တော်လေးဆိုးနေတယ်… ကျောက်ကပ်လဲဖို့လိုတယ်…”
ဆေးကုဖို့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတော့ ကောင်လေးကပေးထားပြီးပြီ… ဒါပေမဲ့ သင့်တော်တဲ့ ကျောက်ကပ် ကိုတော့ရှာမတွေ့သေးဘူး…
ဆရာဝန်က ညီမလေးကို ရှင်းပြတယ်… ကောင်လေးက ညီမလေး ကျောက်ကပ်လဲဖို့လိုတယ်လို့ပြောလိုက်ချိန်မှာ ကောင်လေးက အော်ပြီးပြောတယ်… “ကျွန်တော့ဟာ သုံးပါ… ကျွန်တော်က သူ့အစ်ကိုပါ…” ဒါပေမဲ့ စစ်ဆေးပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကောင်လေးရဲ့ကျောက်ကပ်က လဲ ညီမလေးနဲ့ မသင့်တော်ဘူးဖြစ်နေတာကို ကောင်လေး သိလိုက်ရတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး “ကျွန်တော်က သူ့အစ်ကိုပါ…” ဆိုတာကိုဘဲ ရေရွတ်နေတယ်… ဆရာဝန်ကတော့သူဆိုလိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်… “ကျွန်တော်က သူ့အစ်ကိုပါ… ကျွန်တော့ကျောက်ကပ် ဘာဖြစ်လို့ ညီမလေးကိုပေးလို့မရတာလဲဗျာ…”
ကောင်လေးကတော့ အခန်း အပြင်ကနေ ညီမလေးကို ကြည့်နေပြီး အအ လေးပြုံးနေတယ်… အဲဒီ အချိန်မှာ ညီမလေးရဲ့မျက်နှာကတော့ မျက်ရည်တွေနဲ့ရွှဲလို့… ဟို တံခါး အပြင်ဘက်က သူ့ကို တောက်လျှောက် အရှက်ရစေတယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တဲ့ အစ်ကို့ကို ကြည့်ရင်း သူမရဲ့ ချိနဲ့နေတဲ့ အသံနဲ့ပြောလိုက်တယ် “နင် အပြင်မှာဘာလုပ်နေတာလဲ… ဘာလို့မ၀င်လာတာလဲ”… ကောင်လေး ကြောင်သွားတယ်… တုန်တုန်နဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ် “ ငါဝင်လာလို့ရသလား…” ညီမလေးက မျက်ရည်ဝဲ၀ဲနဲ့ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်တယ်…
ကောင်လေးက လက်ကို နောက်ပစ်ပြီး ညီမလေးရဲ့ကုတင်နားကိုရောက်လာတယ်… ညီမလေးက ဘာဖြစ်လို့လက်ကို နောက်ပစ်ထားရတာလဲလို့မေးတယ်… ပြီးတော့ လက်ကို အတင်းပြခိုင်းတယ်…
ကောင်လေးက လက်ကို ဆန့်ထုတ်ပြလိုက်တယ်… လက်မှာက ပတ်တီးတွေနဲ့… ဖိနပ်တစ်ဖက်ကလဲ ပါမလာဘူး… အဲဒါက ညီမလေးကို ဆေးရုံလိုက်ပို့တဲ့ အချိန်မှာ လမ်းမှာ ခြစ်မိထားတာ… ပြေးရင်းနဲ့လဲ ဖိနပ်တစ်ဖက် ကျွတ်ကျန်ခဲ့တယ်… ညီမလေးကတော့ ခါတိုင်းလိုဘဲ… “ဘာလို့ ဒီလောက် အ ရတာလဲ… လက်မှာလဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့… ဖိနပ်ကလဲ ပျောက်ပြန်ပြီ…” ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခေါက်ပြောတဲ့ အချိန်မှာတော့ မျက်ဝန်းမှာ ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့ ရင်နာမှုအပြည့်တွေနဲ့ပါ…
ဒါကတော့ ကောင်လေး ပထမဆုံး အကြိမ် ညီမလေးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ညီမလေးရဲ့အခန်းထဲကို ၀င်ခဲ့တာပါ…
အချိန်က တနေ့ပြီး တနေ့ ကုန်ဆုံးသွားတယ်… ညီမလေးရဲ့ရောဂါ အခြေအနေကလဲ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပိုဆိုးလားတယ်… ခဏခဏ သတိမေ့မျှောတဲ့ အနေအထားမှာရောက်နေတယ်…
ဆေးရုံက ဆရာဝန်တွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင့်တော်တဲ့ကျောက်ကပ်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်… အစားထိုး ခွဲစိတ်မှုက လဲ အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့တယ်… ညီမလေးကို သေမင်းရဲ့လက်ထဲ ကနေပြန်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်… ဒါပေမဲ့… သူပြန်နိုးလာတဲ့ အချိန်မှာ ရင်းနှီးတဲ့ အအ လေးပြုံးတတ်တဲ့ သူ့ အစ်ကို ရဲ့ အပြုံးကို မတွေ့ရတော့ဘူး… ဆရာဝန်က သူ့ကိုပြောပြတယ်… သူ့အစ်ကို ဒီဆေးစရိတ်တွေကို ရှာဖို့ အတွက် ဟိုးအဝေးကြီး တစ်နေရာမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေတယ်… ညီမလေးလုံးဝနေပြန်ကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ကိုလာခေါ်မယ်… သူ့ကို စိတ်ချလက်ချ အနားယူဖို့မှာခဲ့တယ်…
ညီမလေးဆီကို ၂ရက်ခြား ၃ရက်ခြားတစ်ခါ စာလုံး မညီမညာရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင် အမြဲရောက်ရောက်လာတယ်… ဒါတွေကတော့ သူ့ အစ်ကိုဆီကနေလာတဲ့စာတွေပါဘဲ… စာထဲမှာ ရေးထားတာတွေက အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွန်းတယ်… ပြီးတော့ အက်ကြောင်းထပ်နေတယ် … “ငါနေကောင်းတယ် … ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော်”
ဆေးရုံဆင်းတဲ့နေ့မှာ ကောင်လေးကဆေးရုံမှာ ညီမလေးကိုလာမကြိုဘူး… ညီမလေးက ဆရာဝန်ဆီကနေ သူ့အစ်ကိုပေးလိုက်တဲ့ ၀က်ဝံအမွေးပွရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို ရလိုက်တယ်… အမွေးပွရုပ်ရဲ့ခြေထောက်နားမှာ သွေးစလေးတွေပေလို့…
ဆရာဝန်က ညီမလေးကို ရှင်းပြတယ်… ကောင်လေးပေးတဲ့ ပိုက်ဆံဟာ ကျောက်ကပ်လဲဖို့ အတွက်ဘဲလောက်တယ်… တခြားဆေးပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံမလောက်ဘူး… ဒီလို ရက်ရှည်ကြာတဲ့ဆေးကုသမှုစရိတ်ရဖို့ အတွက် ကောင်လေးက မနက်ပိုင်းမှာ မုန့်ရောင်းတယ်… ညနေပိုင်းမှာ တခြားရရာ အလုပ်ကိုလုပ်တယ်… ပိုက်ဆံရတဲ့ ဘယ်လို အလုပ်မျိုးမဆိုသွားလုပ်ရှာတယ်…
ကောင်လေးဆေးရုံမှာ ညီမလေးကို လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်က သင့်တော်တဲ့ကျောက်ကပ်ရှာတွေ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ ကောင်လေးက အအ လေးပြုံပြီး ဆရာဝန်ကို ရိုရိုသေသေ ကန်တော့လိုက်သေးတယ်… ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကိုပြောလိုက်တယ် “ကျွန်တော်… ညီမလေး… လက်ဆောင်ဝယ်ပေးမယ်… သူ… နိုးလာရင်… သူ့ကိုပေးမယ်…”
ကောင်လေး ပင်ပန်းနေတဲ့ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သယ်ပြီး အရုပ်ဆိုင်မှာ ဖြူဖွေးနေတဲ့ ၀က်ဝံ အမွေးပွရုပ်လေးတစ်ရုပ်ဝယ်ခဲ့တယ်… သူအရမ်း ပင်ပန်းနေတာလဲ ပါမယ်နဲ့တူတယ်… တစ်ချက် သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန် လမ်းမကို ဖြတ်ကူးတုန်း အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းလာတဲ့ ကားတစ်စီးတိုက်ခံလိုက်ရပြီးလွင့်ထွက်သွားတယ်… ဆေးရုံကို ရောက်လာတော့ သတိမေ့မျှောနေပြီ…
လက်မှာတော့ အမွေးပွရုပ်ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကို ကျစ်ကျစ်ကိုင်ထားဆဲ… လက်မှာထွက်နေတဲ့သွေးတွေဟာ တစက်တစက်စီးကျနေပြီး အရုပ်လေးရဲ့ခြေထောက်မှာစွန်းထင်သွားတယ်…
သူ မဆုံးခင်လေးမှာ ဆရာဝန်ကိုပြောလိုက်တယ်… “၀က်ဝံရုပ်… ညီမလေးကိုပေးပေးပါ…”
ပြောပြီးတော့ ဒီလိုဘဲ အအ လေးပြုံးပြီး လူ့ဘ၀ကနေ ထွက်သွားတယ်… သူပျော်သလား… ၀မ်းနည်းသလားဆိုတာ တော့မသိဘူး…
ဆရာဝန်က ညီမလေးကို ရှင်းပြတယ်… သူရခဲ့တဲ့ စာတွေဟာ သူ ကောင်လေးရဲ့ လက်ရေးကို အတုခိုးပြီးရေးခဲ့တာပါ… သူသိနေတယ်… ကောင်လေးကလဲ သူ့ညီမ နေပြန်မကောင်းတဲ့ အချိန်အထိ သူသေသွားပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပေးသိစေချင်မှာမဟုတ်ဘူး… ဆရာဝန်က ကောင်လေးရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးချင်လို့ ဒီစာတွေကိုရေးခဲ့တာပါ…
ညီမလေးဟာ ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့ဘဲ တိတ်ဆိတ်စွာဘဲ အရုပ်ကို ယူပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်…
အခန်းထဲမှာတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဘဲ… ဒါပေမဲ့ ရှင်းထားတာ အရမ်းသပ်ရပ်တယ်…အထူသဖြင့် ညီမလေးရဲ့အခန်း… သူရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာထက်တောင်သပ်ရပ်သေးတယ်… တစ်ခုဘဲ… ပရိဘောဂတွေ အပေါ်မှာ ဖုန် ပါးပါးလေးတစ်လွှာဖုံးနေပြီ…စာပွဲပေါ်မှာ ပန်းအိုးတစ်လုံးရှိတယ်… ပန်းအိုးထဲက ပန်းတွေလဲ ညိုးနွမ်းနေပြီ… ဘေးမှာ မညီမညာရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင်… “ညီမလေး ပြန်လာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်…”
ကောင်လေး ညီမလေး ဆေးရုံဆင်းရတော့မှာကို သိလို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာလေးတွေပါ…
ဒါပေမဲ့ ဒီအချိန်မှာတော့ အအလေးရယ်တတ်တဲ့ ရယ်သံကို မကြားရတော့ဘူး…
ညီမလေး ကောင်လေးရဲ့ အခန်းထဲကို ရောက်လာတယ်… ကောင်လေးကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရှင်းဖို့လုပ်တော့ သူ ကြည့်ချင်နေတဲ့ စာအုပ်လေးကို တွေ့ခဲ့တယ်…
စာအုပ်မှာ ဘိန်းမုန့် အနံ့လေးက စွဲလို့… စာအုပ်ထဲမှာတော့ မညီမညာ ရေးထားတဲ့ စာလုံးလေးတွေ…
ညီမလေးက အအိပ်ကြီးတယ်… မနက် ထတဲ့အချိန်မှာ မဆူညံအောင်လုပ်ရမယ်… သူ့ကို မနိုးအောင်လို့…
ညီမလေးက ဘိန်းမုန့်မကြိုက်ဘူး… ခေါက်ဆွဲထုတ်ဘဲစားတယ်… မနက်ထလာရင် သူ့ကို အရင်လုပ်ပေးပြီးမှ အပြင်ထွက်ရမယ်…
ညီမလေးက သူ့အခန်းထဲ ၀င်တာကို မကြိုက်ဘူး… သူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေတာကို မကြိုက်ဘူး… သူ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အခန်းထဲမ၀င်ရဘူး…
ညီမလေးက ငါက သူ့အစ်ကိုဆိုတာကို တခြာလူ မသိစေချင်ဘူး… သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို လုံးဝပေးသိလို့မရဘူး…
ညီမလေးမှာ ရောဂါရှိတယ်… ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ မေမေ့လို ရောဂါရှိတယ်ဆိုတာကို လုံးဝပေးသိလို့မဖြစ်ဘူး…
ငါ အလုပ်ကြိုးစားပြီး ပိုက်ဆံရှာရမယ်…
ညီမလေးကတော့ ကောင်လေးနဲ့ စာအုပ်လေးကို ဖတ်ပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုတော့တာဘဲ…
အဲဒါပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ညီမလေးကလဲ ကောင်လေးလိုဘဲ ညတိုင်း ခြံထဲက မြက်ခင်းပြင်မှာ ကောင်းကင်းထက်က ကြယ်တွေကို ကြည့်ရတာ နှစ်သက်ခဲ့တယ်…
ကောင်းကင်ယံမှာ ကြယ်လေးတစ်လုံးထပ်တိုးလာပါတယ်… အဲဒါကတော့ သူ့ရဲ့ “အ”နေတဲ့ အစ်ကိုလေးပါဘဲ…
သူ့ဖေဖေမေမေနဲ့ နီးကပ်လို့ သူ့ကို မိုးကောင်းကင်ထက်ကနေ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်… ။ ။
Posted by မင်းသားကြီး at 12:000comments
ကျနော် နဲ့ မြန်မာ့မြေ
အေးတရ် ၊ ထပ်အိပ်လို့မရတော့လို့ ထ ၊ မျက်နှာသစ် ၊ ဂျာကင်ကောက်စွပ်လို့
အာရုဏ်မတက်ခင် မှောင်မှောင်မဲမဲထဲ . . .
၁။ ကြယ် နဲ့ လ မြင်နေရဆဲအချိန်
(က) ကိုရင်တွေ သပိတ်လေးပိုက်လို့ ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်
(ခ) ဂက်ဂလောက် ဂက်ဂလောက် ငိုက်မြည်နေတဲ့ မြင်းလှည်း
(ဂ) ဈေးဗန်းတွေရွက်လို့ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဈေးသည်တွေ
(ဃ) လရောင်အောက် ဓနိတန်းနဲ့ စီထားတဲ့ မြစ်၊ လှေ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ မောင်းလို့
(င) ဟိုဒေါင့် ဒီနားက လှမ်းလှမ်းမြင်ရတဲ့ မီးမှိတ်တုပ်တုပ် ဆိုင်လေးတွေ
၂။ တိမ်တွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းလာချိန်
(က)မြို့ ဦးစေတီက ဆည်းလည်းသံလေးတွေ
(ခ) စူးရှရှအော်လို့ အစာရှာထွက်တော့မရ့် ငှက်လေးတွေ
(ဂ) မြေပေါ် အသံတိုးတိုးလေးပေးပြီး ကြွေသွားတဲ့ ပန်းရောင်စုံတွေ
(ဃ) နှင်းတွေစိုနေတဲ့ အရွက်တွေက လှပနေတဲ့ လေအလာ ယိမ်းအက
(င) တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ဂျုံထိုးနယ်နေတဲ့ တ၀က်ဖွင့်ကာစ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
၃။ နှင်းတွေထူပြီး အလင်းဖျော့ဖျော့အချိန်
(က) မြို့ပတ်လမ်းပေါ်က မသဲမကွဲ လမ်းလျှောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသူတွေ
(ခ) စိမ်းလန်းနေတဲ့ လယ်ကွင်းတွေထဲက အစာငမ်းနေတဲ့ နွားတွေ
(ဂ) ရှမ်းဘောင်းဘီပွပွနဲ့ ၀ါးကျည်တောက်ဆွဲလာတဲ့ ထန်းတတ်သမား
(ဃ) တိုးကြိတ်နေတဲ့ မြို့တတ်တဲ့ လိုင်းကားပေါ်က ခရီးသည်တွေ
(င) မြစ်ကူးတံတားပေါ်က စီးကရက် ရပ်ဖွာနေတဲ့ ကျွန်တော် လန်းဆန်းလို့
Posted by မင်းသားကြီး at 05:03 1 comments
ငါ့ကို ယုံပါ ၊၊
(ဖိနပ် မစီးထားတဲ့ ကလေးငယ်လိုပဲ.....
အိမ်ထဲဝင်ဖို့ ငါ့ကို မဖိတ်ချင်ကြဘူး....)
တာရာမင်းဝေ ရဲ့ကဗျာလေးပါ။ မွန်းကျပ်တဲ့
တာရာမင်းဝေ ရဲ့ကဗျာလေးပါ။ မွန်းကျပ်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ရဲ့ ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်ရာရဲ့ ၀င်ပေါက်ပေါ့....
ပစ္စုပ္ပန် ရဲ့ ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်ရာရဲ့ ၀င်ပေါက်ပေါ့....
Posted by မင်းသားကြီး at 09:450comments
Labels: သူတို့ကဗျာ
(၁) ဝံပုလွေတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ အနေနဲ့ဆိုပြီး ကိုယ်ငယ်ရွယ်အားပျော့ချိန်မှာ ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးမားသူကို မတိုက်ခိုက်ဘူး။
(၂) တကယ်လို့ မဖြစ်မနေ ကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးသူကို တိုက်ခိုက်ရတော့မယ်ဆိုရင် အုပ်စုအင်အားနဲ့ပဲ တိုက်ခိုက်တယ်။
(၃) ဝံပုလွေလည်း တောဘုရင်ဖြစ်ချင်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဝံပုလွေဆိုတာကို သူတို့သိတယ်။
(၄) ဝံပုလွေတွေက ကုန်ကျမှုနည်းနည်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်များများအတွက် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိတယ်။
(၅) ဝံပုလွေတွေဟာ တစ်ကိုယ်တည်းလှုပ်ရှားတတ်တယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ဟာ စည်းရုံးမှုအကောင်းဆုံး တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ ကိုယ့်အဖော်ကို တစ်ကောင်တည်းထားပြီး သူတို့ထွက်မပြေးတတ်ဘူး။
(၆) ဝံပုလွေတွေလည်း ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အစာအိမ်က အသားငါးတွေကိုပဲ အစာခြေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသောအရာက ဖမ်းမိတဲ့သားကောင်ကို ပြောင်ပြောင်စင်စင် စားလိုက်တာပါပဲ။ ရိုးသားဖြူစင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်သူတချို့က မမြင်ကွယ်ရာမှာ မရိုးသား၊ မဖြူစင်တဲ့အလုပ်တွေ လုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။
(၇) ဝံပုလွေတွေဟာ ကိုယ့်ပြိုင်ဖက်ကို အလေးထား၊ လေးစားတယ်။ ကိုယ့်ပြိုင်ဖက်နဲ့ မတိုက်ခိုက်ခင် ပြိုင်ဖက်အကြောင်းကို လေ့လာထားတတ်တယ်။ ပြိုင်ဖက်ကို ဘယ်တော့မှ ပေါ့ပေါ့မတွက်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဝံပုလွေတွေဟာ တိုက်ခိုက်တိုင်း ရှုံးနိမ့်သလောက် မရှိခဲ့ပါဘူး။
(၈) ဝံပုလွေအဖိုဟာ ဝံပုလွေအမ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ ဝံပုလွေမကို စောင့်ရှောက်တော့တယ်။ ရင်သွေးငယ်မွေးဖွားပြီး ရင်သွေးငယ်ကိုယ်တိုင် လမ်းလျှောက်နိုင်၊ အစာရှာနိုင်တဲ့အထိ စောင့်ရှောက်တယ်။ ဝံပုလွေတွေဟာ သာမန်အားဖြင့် တလင်တမယားကို ပိုအသားပေးတယ်။ ကိုယ့်အဖော်အသက်ရှင်နေသရွေ့ သက်ဆုံးတိုင်အတူနေတယ်။ ကိုယ့်အဖော်သေဆုံးသွားပြီဆိုမှ တခြားအကောင်နဲ့ နေတတ်တယ်။ ဝံပုလွေတွေဟာ သစ္စာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ရက်စက်တဲ့အသဲနှလုံးရှိသူတွေကို ဝံပုလွေနဲ့မနှိုင်းစေချင်ဘူး။
(၉) ဝံပုလွေမိဘတွေဟာ ကိုယ့်ကလေးတွေ ကိုယ်တိုင်အစာရှာနိုင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးနိုင်ပြီဆို သူတို့အနားကခွာတယ်။ တကယ်လို့ ဝံပုလွေဟာ ဝံပုလွေလို မကျင့်ကြံရင် သိုးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ဝံပုလွေတွေသိလို့ဖြစ်တယ်။
(၁ဝ) ဝံပုလွေတွေဟာ အစာလို့လို ကိုယ့်သိက္ခာကိုတောင်မငဲ့ဘဲ သခင်ကို အမြီးနှံ့ပြတတ်သူ မဟုတ်ဘူး။ ဝံပုလွေတွေဟာ မာနထောင်လွှား စိတ်ကြီးဝင်တာကို မကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ကိုယ်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်။
Posted by မင်းသားကြီး at 10:140comments
Labels: ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့...
မိုးခါးကြီးရွာသွားပြီဆိုတော့ ဇနပုဒ်ငယ်လေးတစ်ခုဆီသို့သူရောက်လာခဲ့သည်။ ရည်ရွက်ချက်မရှိဘဲ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ယခင်ဤရွာလေး ရှိကြောင်းပင်မသိ။ ဤရွာကလေးတွင်နေထိုင် ကြသော လူမျိူးစု သုံးခုအကြောင်းကိုလည်း ကြားပင်မကြားဖူးခဲ့ပေ။
ဤရွာကလေး၌ မိုးခါးကြီးရွာသွားပြီး သောက်သုံးမိသူများရူးသွားကြောင်း၊ မသောက်ဘဲ နေသူများက လည်း ကျောက်ရုပ်ဖြစ်ကျန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းနှင့်အတူ ဤရွာမှလူများ၏ ရှေးဟောင်းသင်္ချာ နည်း စနစ်များကို သူသိခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
မိုးခါးကြီး ရွာခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်း ၊ကျောက်ရုပ်ဖြစ်ခြင်း၊ စသည့် သတင်းများထက် ရှေးဟောင်း သင်္ချာ နည်းဆိုင်ရာသတင်းက သူ့ကို ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ လေ့လာ ဆည်းပူးချင် စိတ်များတဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် သူဤ ရွာသို့ ရောက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်။
မိုးခါးရေ သောက်ထားပြီးသူ တွေဟာ အသ်စိတ် မရှိကြတော့။ သူတို့ ပြောနိုင်တာ တချက်ဘဲ ကျန်ရစ် ခဲ့သည်။ ထိုအချက်ကတော့ သူတို့ သောက်ခဲ့သည့် မိုးခါးရေခွက်အရေအတွက် ကို ပြောပြ နိုင်ခြင်း ဖြစ်၏။
ထိုသို့ ပင်သူမှတ်ချက် ချမိ၏။ မသောက်ရ မနေနိုင်အောင်နှင့် သောက်မိသူကိုလဲ ထပ်ထပ်သောက် ချင်နေစိတ်ရှိအောင် ဆွဲဆောင်ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပုံ ရသည်။ အချို့လူများသောက်ခဲ့ သည့် မိုးခါးရေခွက် အရေ အတွက်က အတော်များလေ၏။
ထိုခွက်အရေ အတွက်များကို သူတို့၏ရှေးဟောင်း သင်္ချာ ညွှန်ပြချက် နည်းများအတိုင်းညွှန်ပြ သွား ကြ၏။ ထိုညွှန်ပြချက်နည်းများကို သူစိတ်ဝင်တစားလေ့လာ မိလေသည်။
အစုသုံးစုခွဲ ပြီးသူလေ့ လာလိုက်ရ၏။
ပထမ အစုမှ လူအများသည်ဓားများ ဝှေ့ရမ်းပြီး ပါးစပ် မှလည်း ရေ- - -ရေ - - -ဟု ညည်းတွားနေ ကြ၏။ သူတို့ သောက်ခဲ့သော တစ်ဦးစီ၏ ခွက်အရေအတွက်များကို သစ်ပင်များပေါ်မှာ သူဖတ်ခဲ့ ရ သည်။ ပင်စည်ပေါ်မှာ ဓါးနှင့် အထစ်ကလေးများ ထစ်ပြီး ခွက်အရေ အတွက်ကို ရေးမှတ်ကြ သူများ ဖြစ်သည်။ ဓါးထစ်တ ထစ်လျှင် တခွက်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အစုမှလူအများကတော့ လက်ထဲမှ ကြိုးများကို ဆွဲချည် ဆန့်ချည် လုပ်ရင်း တဟင်းဟင်း အော်နေကြ ၏။ သူတို့ သောက်ခဲ့သည့် ခွက် အရေ အတွက်ကို သူတို့လက်ထဲမှ ကြိုးများမှ တဆင့် သိ ရ၏။ သူတို့ က ကြိုးကို အထုံးကလေးထုံးရင်း မှတ်သားသွားကြ ခြင်းဖြစ်၏။
ကွစ်ပူ (ျှကငစက) ပုံစံပါလား
သူ... အလွန် သဘောကျသွား၏။ ထိုသို့ကြိုးအထုံးဖြင့် ရေတွက်မှုသဘောတရားကို တောင်အမေ ရိကတိုက်မှ အင်ကာ လူမျိုးများ လည်းသုံးစွဲဖူး၏။
လေ့လာရ အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်မှာ တတိယ အုပ်စုဖြစ်သည်။
တတိယ အုပ်စုမှလူများသည် လမ်းမပေါ်မှာ ကခုန်နေကြ၏။ ဘာစကားကိုမှ မပြောကြ။ သို့သော် သူတို့၏ မျက်လုံးများထဲမှ မွတ်သိပ်မှုကို တွေ့နေရသည်။
သူတို့၏ ကခုန်မှုမှာ သူတို့သောက်ခဲ့သည့် ခွက်အရေ အတွက်ကိုညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို ကိန်းဂဏာန်းများ အဖြစ် သင်္ကေတပြုကာ ဖော်ပြ နေကြခြင်းဖြစ်၏။
အဓိပ္ပါယ်ဖတ်ရန် အတော် ခက်ခဲလေသည်။ ဤကဲ့သို့ သော ရေတွက်မှုပုံ စံကို နယူးဂီနီ လူမျိုးများ လည်း သုံးစွဲ ကြ၏။ သူ..ကြိုးစားပမ်းစား လေ့လာယူရလေသည်။ ကျေနပ်အားရ မှုလည်းရှိခဲ့၏ ။
လေ့လာမှုများပြီးဆုံးပြီဟု ယူဆသော အချိန်ကျမှ....
အင်း. .ကျောက်ဖြစ်တဲ့လူကို သွားကြည့်ရဦးမယ်။
မိုးခါးရေမသောက်ဘဲ တောင့်ခံနေသဖြင့် ကျောက်ဖြစ်သွားသူမှာ တယောက်တည်း ဖြစ်၏။ (ကျန်လူ များအားလုံးမှာ မိုးခါးရေ သောက်ပြီးရူး သွားကြ၏။)
ထိုလူသည် သို့မဟုတ် ကျောက်ရုပ်သည် အဝေးသို့ လှမ်းကြည့်နေ၏။ ကျောက်ဖြစ်နေသော မျက်လုံး များကတော့ ဘာကိုမှမြင်ပုံမပေါ်။ ထိုကျောက်ရုပ်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့် ရှုရင်းသူ. .သက်ပြင်းချမိ၏။
ထိုလူအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာလဲစိမ့်ပြီးကြောက်လာ မိ၏။
အင်း.. အခုပြန်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်..
ရုတ်ချည်းဆိုသလို ကောင်းကင်သည် ညိုမှိုင်းသွား၏။
ဝေမှုန်သော်လဲ ကြမ်းတမ်းသည့်လေတို့က အေးရှစွာ ကျဆင်းလာသည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော ရနံ့ကို ရှု ရှုက်လိုက်ရပြီး . . .
ရင်ထဲမှာ ပူလောင်ပြီး ကမ္မာပျက် သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။
လေထဲမှာမိုး၏ အငွေ့ အသက်တို့ ပါလာသည်။ သူ့အပေါ်ကျလာသော မိုးစက်မိုးမှုန် ပျပျကလေး များကို လက်နှင့် ဝှေ့ယမ်းကာကွယ် နေမိ၏။
မိုးခြိမ်းသံ ကြီးက ခြောက်ခြား ဖွယ်ရာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ သဲကြီးမဲကြီးရွာတော့ မည်မှာသေချာ၏။
သူ ယောက်ယက်ခက် ပြေးလွှားနေမိသည်။ ဤမိုးကို ကာကွယ်၍ရတော့မည် မဟုတ်ကြောင်းကို လည်း သိလိုက်ရသည်။
လူများကို ဒုက္ခဆိုး အမျိုးမျိုးပေးခဲ့သော မိုးခါးကို သူပက်ပက်စက်စက် ဆဲဆိုရင်း လမ်းပေါ်မှာ ခုန် ပေါက်နေမိ၏။
ပြီး ... လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို သတိရပြီး . .ဘေးဘီဝဲယာဆီလျှောက်ကြည့် မိသည်။
ဓါးတစ်လက်ကို တွေ့သည်။ ကောက်ယူပြီး သစ်ပင်ဆီသို့ ပြေးသွားကာ ပင်စည်မှာအထစ်လုပ်ကြည့်၏
ခုတ်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ သော်ဘာ တစ်ခုမှ ထင် မကျန်၊ ဆွေးမြေ့နေပြီဖြစ်သော ဓားကြီးက ကြိုး သွား၏။
တောက် . . .
လမ်းမပေါ်မှာ ကြိုးတချောင်းကိုတွေ၍ ကုန်းကောက်ရသေးသည်။ ကြိုးကို အထုံးလေးများရစ် ချည် ကြည့် ၏။ မရချေ။ ထို ကြိုးထုံးနည်းကို သူမထုံးတတ်၊ ပုံစုံမျိုးစုံနှင့် ကမန်းကတန်း ချည်ကြည့် နေပြီး မရလွန်းသည့် အဆုံးမှာ ထိုကြိုးကို ဒေါသ တကြီး လွှင့်ပစ်လိုက်၏။
နောက်ဆုံး အနေနှင့် ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းနှင့် ဖော်ပြနိုင်ရန် သူကြိုးစားရသည်။ မိုးစက်တွေ က လည်းခပ်ပါးပါး ကျရောက်နေပြီ ဖြစ်၏။
သို့ သော်လည်း ဒူးမြောက် လက်မြောက် လုပ်နေရခြင်းသည် သူ့ အတွက် အဆင်မပြေလှချေ။ ကိုယ် အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများမှ တဆင့် ကိန်း ဂဏာန်းကို ဖော်ပြနေသလို မဖြစ်ဘဲ ဓါတ်လိုက်နေသလို ၊ ဘရိတ်ဒန့် ကနေသလို လို ဖြစ်နေသည်။
ထိုသို့ ဆိုရင်တော့ တနည်းဘဲ ကျန်တော့သည်။ ကျောက်ရုပ်ရှိရာကို သူအပြေးသွားလိုက်၏။
မိုးခါးရေကို သူမသောက်ဘဲ ကျောက်ရုပ် အဖြစ်ခံတော့မည်။
ကျောက်ရုပ်၏ နဘေးမှာ သူဝင်ရပ်သည်။ ရပ်ရပ် ခြင်းမှာတော့ လက်နှစ်ဘက် တွဲလောင်းချပြီး တောင့် တောင့် ကြီးရပ်နေလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မှာမူ နောင်လာနောက်သားတွေ အမြင်မှာ သူ့ ကျောက်ရုပ်လှပရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုသတိရသည်။
ထိုသို့ဖြင့် တစောင်းပြင်ရပ်သည်။ ခါးမှာ လက်ထောက်ရပ်၏၊ ဆံပင်ကို ပင့်တင် ရသေးသည်။ ဓါတ် ပုံဆရ ရှေ့မှာ အိုက်တင်ပေးသည့်နှယ် သူ့ကိုယ်ဟန်ကို အမျိုးမျိုး ပြုပင်နေရ၏။
သိပ် အချိုးမပြေသလို ခံစားမိ၏။ မိုးကြီးကရွာ လာပြီ။ ထိုအခါကျမှ ပန်းပုရုပ်တစ်ခု ၏ကိုယ် ဟန်ကို သတိရပြီး သူထိုင်ချလိုက်သည်။
ကမ္ဘာကျော် ပန်းပုဆရာကြီး သြဂတ်ရိုဒင်၏ အတွေးအခေါ် သမား (ွှ့ငညုနမ ) အမည်ရှိ ပန်းပု၏ ကိုယ်ဟန်အတိုင်း သူထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဿန တစ်ခုခုကို အလေးအနက် စဉ်းစားတွေးခေါ်နေဟန် . .
မိုးကြီးက တဝေါဝေါ ရွာချလာ၏။
အား . .အေးလိုက်တာ
ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းအေးနေသော်လည်း ဤကိုယ်ဟန် အနေအထားကိုမပျက်အောင် သူထိုင်နေ ခဲ့၏။
တစ်ကိုယ်လုံးလဲ စိမ့်စက် ရွှဲစိုနေပြီ။ ထိုင်ရတာလဲ ပင်ပန်းလှပြီ၊ မိုးကြီးရွာတာလဲ ကြာပြီ။ နောက်ဆုံး ဆဲချိန်ကျမှ ဤမိုးသည် မိုးခါးမဟုတ် ရိုးရိုး မိုးဖြစ်မှန်း သူသိရ၏။
ဘာပြောရမှန်းပင်မသိ။ အူကြောင်ကြောင်ဖြင့် သူပြန်ထလိုက်ရသည်။ ထွက်ခွာရန် ပြင်ချိန်ရောက်မှ သူ့ ကို စိုက်ကြည့်နေသော မျက်လုံးအစုံများကို မြင်လိုက်ရသည်။
ကိုယ့် အပူနှင့် ကိုယ် ပြာလောင်ခတ်နေခဲ့၍ ထိုလူများကို သူသတိမထားမိခဲ့။ ( ဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေကြမှန်းမသိ)
သူ့လိုဘဲ လာရောက်လေ့လာ သူများဖြစ်ပုံရသည်။ သူ့ကို ကြည့်နေကြရင်းတယောက် ကပြော၏။
အေးလေ . . . မိုးခါးရေတွေ သူဘယ်နှစ်ခွက်လောက် သောက်ပစ်လိုက်လဲမှ မသိတာ။ အများတုံးသောက် ပြီး အရူးဆုံး ဖြစ်သွားတာနေမှာပေါ့။. . .ကျွတ်. .ကျွတ်. .ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ
သူတို့အားလုံးက သူ့ ကို စိတ်မကောင်းစွာ ၀ိုင်းကြည့်နေကြလေသည်။
ကြိုက်လို့ ပြန်တင်ထားဖြစ်တာပါ ...
တာရာမင်းဝေ အမှတ်တရ( နေရဲ့ အင်္ကျီ စာအုပ်မှ)
Posted by မင်းသားကြီး at 11:160comments
သူ့ လို “လူ”
ပုံမှာ မြင်တွေ့နေရတာကတော့ Anand kumar အမည်ရ သင်္ချာဆရာ တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
တွက်ချက်ခြင်းကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အထုံဝါသနာပါပြီး အတန်းပညာ အဆင့်တိုင်းမှာ သင်္ချာ အမှတ်အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာလည်း သင်္ချာဘာသာရပ် အထူးပြုပြီး တက်ရောက်ရာ ဘွဲ့ရအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Anand ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ကမ္ဘာကျော် သင်္ချာ ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် ကိန်းဘရိတ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်ကို ဆက်လျှောက်ပါတယ်။ Number Theory (Mathematical Spectrum , Mathematical Gazette) အစရှိသဖြင် ကိုယ်တိုင်ဖန် တီးပြီး လျှောက်လွှာမှာ သူ့ အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် ကိန်းဘရိတ်ခ်ျတက္ကိသိုလ်မှာ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဝမ်းသာလို့မဆုံးတဲ့ Anand ဟာ ဖခင်နဲ့ တိုင်ပင်ပါတယ်။ Anand တို့ မိသားစုဟာ ဆင်းရဲပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ဖို့ ငွေမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ဝန်း ဆပွန်ဆာပေးမယ့် သူ တစ်ယောက်ယောက် များ တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ မျော်လင့်ချက်နဲ့ လိုက်ရှာပါတယ်။ ကူညီမယ့်သူ မရှိပါဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ့် အိပ်မက်ကို အဆုံးရှုံးခံလိုက်ရပါတယ်။ အဖေဖြစ်သူကလည်း ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် တက္ကသိုလ် ဆက်မတက်ဖြစ်ဖို့ ကြိမ်းသေသွားပါတယ်။
နောက်တော့ အမေနဲ့အတူ မုန့်ပြားသလပ် ရောင်းတဲ့ အလုပ်ပဲ လုပ်ကိုင် ပါတော့တယ်။ အပိုဝင်ငွေရရန်အတွက် လည်း ကလေးတွေကို သင်္ချာ သင်ပေးပါတယ်။ မုန့်ပြားသလပ် ရောင်းတဲ့ ရထားဘူတာဆီ ရောက်အောင် သွားရတဲ့ ခရီးက ၆ နာရီကြာပါတယ်။ သူ့မှာ သိပ်အချိန်မရပါဘူး။ လမ်းခရီးမှာ တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် တစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ရက်ကို နာရီပိုင်းမျှအချိန်ပေးပြီး နေ့စဉ် ပုံမှန် သင်္ချာနဲ့ ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေ ရှာဖတ်ပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ကျတော့ သူနေတဲ့ မြို့ ငယ်တွင်းက စာကြည့်တိုက်တော်တော်များများကို သွားပြီး ရှာဖတ်ပါတယ်။
နောက်တော့ စိတ်ကူးတစ်ခု ရလာပြီး ရပ်ကွက်ထဲက အခန်းကျဉ်းတစ်ခုကို တစ်လ အိန္ဒိယရူပီ ၅၀၀ နဲ့ ငှားရမ်းပြီး ကိုယ်ပိုင် သိပ္ပံကျောင်းတစ်ခု ဖွင့်ပါတယ်။ ကျောင်းကို Ramanujam School of Mathematic (RSM) လို့ အမည် ပေးထားပါတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပဲ ကျောင်းသား နှစ်ယောက် ကနေ ၃၆ အထိတိုးလာပါတယ်။ သုံးနှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျောင်းသား ဦးရေ ၅၀၀ အထိရှိလာပါတယ်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းရောက် တော့ ဆင်းရဲသားများအတွက် ကူညီဖို့ စိတ်ကူးရလာပါတယ်။
လခများများပေးမှ တက်နိုင်မယ့် သင်တန်းကျောင်း မတက်နိုင် တဲ့ ကျောင်းသားများကို ခေါ်ယူပြီး သင်ကြားပေးပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က စတင်လို့ Super 30 ပရိုဂရမ် စတင်ပေးပါတယ်။ Super 30 ဆိုတာ ကျောင်းရဲ့  သင်္ချာအတော်ဆုံး ကျောင်းသား ၃၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း ၃၀ထဲမှာ သူတောင်းစား၊ အိမ်ခြေမဲ့၊ အမှိုက်ကောက်သမား အစရှိသဖြင့် ဆင်းရဲနှုံချာတဲ့ ကလေးတွေတောင် ပါဝင်လာပါတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ သူမွေးထုတ်ပေးတဲ့ စူပါ ၃၀ ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့  အတော်ဆုံး သင်္ချာကျောင်းသားများ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လူတန်းစားကွာဟပေမယ့် ဥာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အိန္ဒိယတို့ မြင့်မားတယ်ဆိုတာကို Anand မှ သက်သေပြနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ယင်း စူပါ ၃၀ ဟာ ကမ္ဘာ့ သင်္ချာအတော်ဆုံး စာရင်းတွေ အထိတောင် ပါဝင်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ စစ်ပေးတဲ့ စူပါ ၃၀ စာမေးပွဲကို ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူဟာ ၅၀၀၀ နဲ့အထက်အထိ ရှိလာပါတယ်။ သူမွေးထုတ်ပေးတဲ့ ကလေးအားလုံးကို အိန္ဒိယ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရအောင် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ စူပါ ၃၀ စာရင်းမပါလည်း သင်ပေးသမျှကျောင်းသားတိုင်း ကို အိန္ဒိယရဲ့ အကောင်း ဆုံး တက္ကသိုလ်များသို့ အများစု ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အိန္ဒိယပြည်တွင်းရှိ အစိုးရတက္ကသိုလ်နဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများက သူ့ကို လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ သူ ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ကျောင်းမှာပဲ ဆက်လက်သင်ကြားပါတယ်။ လူဦးရေတိုးလာတဲ့အတွက် အခန်းချဲ့ ရပြီး ဒီအတွက် အခြား အလုပ်တွေပိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲသားအများစုကို သင်ပေးရတဲ့အတွက် လခ မယူပါဘူး။ လူတန်းစားပေါင်းစုံတက်ရောက် လာတဲ့အတွက် အချို့ ကို အိန္ဒိယမှာ အသက်သာဆုံး လခနဲ့ သင်ကြားပေးပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကြောင့် ကိန်းဘရိတ်ခ်ျတက္ကသိုလ် ဟာ ကျောင်းကို တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပေမယ့် Anand ငြင်းဆန်လိုက် ပါတယ်။ အခြား ဥရော နိုင်ငံကြီးမှ ပုဂ္ဂလိကအစိုးရကျောင်းများလည်း သူ့ကို ဖိတ်ခေါ်ပေမ့် ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ သူသင်ကြားပေးတဲ့ ကျောင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ က အခြေခံလူတန်းစား များအတွက်ကော အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ တာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။
BBC, Newsweek , Time တို့မှ လာရောက်အင်တာဗျူးမှုများ ပြုလုပ်ပါ တယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားကိုယ်တိုင် Anand ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လေးစားပြီး သဝန်လွှာများပေးပို့ခဲ့ပါတယ် ။ အကူအညီ လိုအပ်ရင် အချိန်မရွေးတောင်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့် Anand မယူခဲ့ပါဘူး။ စူပါ ၃၀ စာရင်းဝင် ကျောင်းသားများထံလည်း သမ္မတအိုဘားမား မှ ဂုဏ်ပြု စာလွှာများ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ Discovery ရုပ်သံလှိုင်းမှလည်း Anand ရဲ့ ကျောင်းကို တစ်နာရီစာ ပရိုဂရမ်ရိုက်ကူးပြီး ထုတ်လွင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။
သူဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးတဲ့ကျောင်းဟာလည်း ကမ္ဘာ့ ရှေ့ ဆောင် လမ်းပြ ကျောင်း ၄ခုစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ဟာလည်း Time မဂ္ဂဇင်းမှာ ရှေ့ ဆောင်လမ်းပြ ပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ပါဝင်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၀၁၁ မှာတော့ ဥရောပ Focus မဂ္ဂဇင်းက Anand ကို ကမ္ဘာ့ စံပြပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလို့ ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယအဆိုးရ မှလည်း အမြင့်ဆုံး လူမူထူးချွန်ဆုများ ချီးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။
ကိန်းဘရိတ်ခ်ျ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး မုန့်ပြားသလပ် ရောင်း ရာကနေ ကမ္ဘာ့စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့ Anand kumar ဟာ သာမန် အရပ်သားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပညာအရည်အချင်းကို တစ်နည်း မဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်တဲ့အတွက် ကမ္ဘာက စံထားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ် တို့အကြောင်းကို လေ့လာဖတ်ရှုပြီး အားတက်လာစေရန်ဆန္ဒနဲ့ ဘာသာပြန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
အောင်ခမ်း (International news for myanmar)
Posted by မင်းသားကြီး at 05:232comments
ယနေ့ဖတ်စရာ
About Valentine (5)
ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့... (5)
နားထောင်ဖူးခဲ့သော ပုံပြင်များ (6)
နားထောင်ဖြစ်ခဲ့သော ... (7)
သူတို့ကဗျာ (10)
ကောင်းနိုးရာရာ ... (11)
Computer Mouse Rught Click Background ထည့်နည်း